Nevis Tourism Authority: Nevis is COVID-19 free | Travel Destination Update
Ikhaya » izithuba » Iindawo ekuyiwa kuzo » Igunya lezoKhenketho laseNevis: INevis yi-COVID-19 yasimahla
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • Abantu benza iindaba • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • Safety • Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
Igunya lezoKhenketho laseNevis: INevis yi-COVID-19 yasimahla
Ngamana 7, 2020
Isiqithi saseNevis, enye yezona mfihlo zigciniweyo zeCaribbean, sibhengeze ngoku Covid-19 simahla emva kokwazisa uthotho lwamanyathelo okuthintela ukusasazeka kwintsholongwane. Isiqithi saseNevis, esiyinxalenye yomanyano lweSt. Kitts kunye neNevis sibe ndlongondlongo kumanyathelo athathiweyo ukukhusela abemi, abahlali kunye neendwendwe ngokufanayo.
I-St. Kitts kunye ne-Nevis bayivala ngokusesikweni imida yayo ngo-Matshi 25, 2020 kwaye ayamkeli nayiphi na inqwelomoya yenqwelomoya, iinqanawa kunye nezikhephe kumazibuko okanye kwizikhululo zeenqwelomoya kude kube kukwaziswa. Abemi beli kunye nabahlali baphesheya kolwandle kuye kwanyanzeleka ukuba bahlale kude nonxweme kude kube kuvalwa umda. Yayisisenzo esinesibindi sokuya kwindawo esiyiyo esinzulu malunga nokuqulatha ukusasazeka kwe-coronavirus, kodwa kubonakala ngathi ihlawule.
Umsebenzi owenziwe ngokukodwa kwi-Nevis uqinisekisa ukuba onke amashishini ahambelana nemiyalelo ebekiweyo kwaye ukuza kuthi ga ngoku, isiqithi sibe ngumzekelo ekusebenzisaneni neehotele, iivenkile zokutyela kunye namanye amashishini ukuqinisekisa ukuba bonke benza eyabo indima kulo mlo .
Elinye inyathelo eliye lanceda iNkqubo yeNevis yezeMpilo eyilelwe ukulandela ukuba abantu baneempawu kusini na ukunciphisa umngcipheko wobhubhane. Ukubeka iliso okuqhubekayo kwenzeka rhoqo kwinkonzo yezempilo kwaye njengoko imi njalo kusekho amatyala ama-3 asekhona kwi-Federation.
UJadine Yarde, iCEO ye Igunya lezoKhenketho laseNevis (NTA) yathi:
Isigqibo sokuvala imida yethu asizanga ngaphandle kokuthathelwa ingqalelo njengoko ukhenketho lubaluleke kakhulu kuNevis, nangona kunjalo, eyona nto iphambili kuthi zezempilo nentlalontle yabantu bethu. Oku kuhlawulile kwaye ngoku sikhululekile kuCovid. Sinqwenelela okuhle kodwa kubo bonke abo banomdla Nevis kwaye sinethemba lokukubona xa siza kuphinda samkele iindwendwe. ”
INevis yinxalenye yeFederal yaseSt. Kitts kunye neNevis kwaye ikwiZiqithi zeLeeward zeWest Indies. Imile ngokuma kunye nentaba yentaba-mlilo kwiziko layo elibizwa ngokuba yiNevis Peak, isiqithi yindawo yokuzalwa kukayise waseMelika, u-Alexander Hamilton. Imozulu iyaqheleka kuninzi lonyaka ngamaqondo obushushu asezantsi ukuya kuma-80s ° F / phakathi kwe-20-30s ° C, umoya opholileyo, kunye namathuba asezantsi emvula. Ukuthuthwa komoya kuyafumaneka ngokulula ngonxibelelwano oluvela ePuerto Rico, naseSt. Ngolwazi oluthe kratya malunga neNevis, iiphakheji zokuhamba kunye neendawo zokuhlala, nceda unxibelelane neGunya lezoKhenketho laseNevis, e-USA Inombolo ye-1.407.287.5204, Canada 1.403.770.6697 okanye iwebhusayithi yethu www.nevisisland.com nakwi-Facebook-Nevis Ngokwendalo.